थाहा खबर: तथागत मुनि
राहत ! (व्यंग्य)
| साउन ३१, २०७४
‘बाढी आयो हजुर, बाढी’, तराईबाट आवाज आयो। ‘हो हजुर, यता पनि पहिरो आयो’, पहाडबाट पनि आवाज सुनियो। 'त, के भो त?' सिंहदरबारले तिनै आवाजतिर प्रतिप्रश्न गर्‍यो। ‘केचाहिँ भएन र हजुर! सबै भयो। धेरैको ज्यान गयो...
गज्जब घोषणापत्र (व्यङ्ग्य)
चुनाव घोषणा भैसकेको थियो। देशलाई स्वर्ग बनाउने प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार हुने र चुनाव जित्ने रिहर्सल पृष्ठभूमिमा चल्दै थियो। आज भने पर्दापछाडिको रिहर्सल रोकेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले पर्दाअगाडि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। पत्रकार जम्मा भैसकेका थिए। तर...
चौतारीमा चुनाव चर्चा (व्यङ्ग्य)
‘रेडियोले चुनाव चुनाव भन्छ त हो गाँठे! होइन, साँच्चै चुनाव आउन लागेको हो त?’ अन्तरे काकाले चौतारीमा भने। ‘आउँछ हो, आउँछ। चुनाव त अब बाजा बजा’र आउँछ। डाँडाँकाँडा घन्काउँदै आउँछ। उहाँ ठूला नेताले गाउँमा चुनाव ला’नी भनेपछि चुन...
मोर्चा-एमाले दोहोरी (व्यङ्ग्य)
संविधान जारी भएपश्चात् मधेशकेन्द्रित र अन्य दलबीच देखिएको विवाद पछिल्लो समय ध्रुवीकृत भएको छ। चुनाव घोषणा गरेपश्चात् मोर्चा र एमालेबीच तीर हानाहान जुहारी चलेको छ। जनता निराश छन्। सरकार जुहारीमा रमिते बनेको छ । उक्त जुहारीको केही अंशः मोर्चा : सं...
क्यारे चाइन्जो, चुनाव हुन लाग्यो! (व्यङ्ग्य)
बिहान ओछ्यानबाट उठ्न पाएको थिइनँ, गाउँबाट डाँडाघरे अन्तरे काकाको फोन आयो। अरू बेला हालखबर र सञ्चो बिसञ्चोबाट कुरा सुरु गर्ने काकाले यसपटक भने एकैपटक चुनावको कुरा निकाले। अत्यन्तै खुसी हुँदै काकाले भने- 'क्यारे चाइन्जो, चुनाव हुन लागेकै हो त बज्ज्या!' &#...
जय साम्यवाद! (व्यङ्ग्य)
जर्मनीमा जन्मेका राजनीतिक दार्शनिक कार्ल मार्क्सले साम्यवादको परिकल्पना गरे। तर त्यो साम्यवाद उनको देशमा कहिल्यै आएन। बरु त्यहाँ हिट्लर जस्ता तानाशाहको जन्म भयो। मार्क्सको जन्ममूमिमै विस्थापित भएको साम्यवाद विश्वका अन्य भागमा कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ कि भनी कार्ल मार्क्स विश्वका अ...